ड्रोनबाट घर/घरमा सामान कहिले पुग्छ? अमेजनका सिइओको पूर्वानुमान पूरा हुन यस्ता छन् कठिनार्इ :: BIZMANDU
ड्रोनबाट घर/घरमा सामान कहिले पुग्छ? अमेजनका सिइओको पूर्वानुमान पूरा हुन यस्ता छन् कठिनार्इ
-डेभिड कोनिग, जोसेज पिसानी/ रासस/एपी
प्रकाशित मिति: Dec 5, 2018 4:10 PM
सान फ्रान्सिस्को। जेफ बेजोसले पाँच वर्षअघि पूर्वानुमान गरेका थिए– अमेजनका सामग्रीहरु ड्रोनले आजसम्ममा मानिसका घरदैलोमा पुर्याउन थाल्नेछन् ।
अमेजनका ग्राहकहरु अझै पनि त्यो दिनको पर्खाइमा छन् । तर, कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बेजोसको त्यो पूर्वानुमान पूरा हुने लक्षण देखिएको छैन ।बेजोसले खुद्रा व्यापार (रिटेल) क्षेत्रलाई रुपान्तरण गरी अर्बौं डलर कमाइसकेका छन् । तर ड्रोनमाथि नियामक निकायबाट निम्तिने अड्चन र सुरक्षा सवालले विश्वकै सबैभन्दा धनाढ्य व्यक्ति बेजोसलाई समेत ठूलो चुनौती खडा गरेको छ ।
उनले डिसेम्बर २०१३ मा अमेरिकी टेलिभिजन च्यानल सीबीएसमा पाँच वर्षभित्र ड्रोनले ग्राहकका घरदैलोमा सामानहरु पुर्याउँछ भनेर तोकेको समयसीमा गुज्रनै लागेको छ । बेजोसले तोकेको त्यो दिन आउन धेरै दिन बाँकी छैन । तर ड्रोनले ग्रामीण वा दुर्गम क्षेत्रमा औषधि लैजान भने सक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । दैनिक उपभोग्य बस्तुको ड्रोनबाट तत्कालै आपूर्ति गर्ने कुरा प्रचारमै सीमित हुँदैछ । किनभने ड्रोनको ब्याट्री त्यति टिक्दैन र गोपनीयताको विषय पनि प्रमुखताका साथ अगाडि आएको छ ।
“मलाई लाग्दैन शहरका कुनाकाप्चामा ड्रोनले खाजा वा डायपर बोकेर उड्नेछन्,” ड्रोन विश्लेषक कोलिन स्नोले भने। ड्रोनको प्रयोग केही उद्योगहरुमा निकै तिब्रताका साथ अघि बढेको छ । व्यापारिक क्षेत्र र उपभोक्तासँग सोझै जोडिएका क्षेत्रमा ड्रोनहरुको प्रयोग प्रायः हुन सकेको छैन ।
“हामी ३० मिनेट वा सोभन्दा कम समयमा ड्रोन मार्फत सामान ढुवानी गर्ने कुरालाई यथार्थमै रुपान्तरण गर्न चाहिरहेका छौं,” अमेजनका प्रवक्ता क्रिस्टेन किसले भने । सियाटलमा प्रधान कार्यालय रहेको यस कम्पनीले आफ्ना ड्रोन विकास केन्द्रहरु संयुक्तराज्य अमेरिका, अस्ट्रिया, फ्रान्स, इजरायल र बेलायतमा रहेको जनाएको छ ।
“हरेक एक दुई घण्टामा ब्याट्री चार्ज गर्नुपर्ने हो भने तपाईंसँग धेरैवटा ड्रोन चाहिन्छ ।” उनले भने। एप्पेलले ड्रोनको भन्दा मानिसबाटै हुने ढुवानीको अर्को फाइदा रहेको बताए। ग्राहकहरु कहाँ बस्छन् र ढोकाको कुन घन्टी बजाउने भन्ने कुरा उनीहरुलाई थाहा हुन्छ । “सूचना प्रविधिबाट यी यस्ता कुरा सुल्झाउन त्यति सजिलो छैन र सस्तो पनि हुँदैन ।”
विज्ञहरुका अनुसार ड्रोन मार्फत व्यापक ढुवानी गर्न सरकारी स्वीकृति प्राप्त गर्न वर्षौं लाग्नेछ । स्काइलजिक रिसर्चका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्नोले ड्रोनमार्फत यथार्थपरक ढङ्गबाट सामान आपूर्ति गर्न र सबै प्रकारका कानुनी तथा अन्य जटिलता टुङ्ग्याउन अझै १० वर्ष लाग्ने बताए । तपाईंको आकाशमाथि उडेको प्रत्येक ड्रोनका बारेमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुलाई जानकारी हुनु पर्दछ । सरकारी अधिकारीहरु यी ड्रोनलाई आतङ्ककारीले प्रयोग गर्ने हुन् कि भनी भयग्रस्त छन् ।
नियमहरुको मस्यौदा भइरहे पनि कम्पनीहरु भने सानो स्तरकै पाइलट कार्यक्रम सञ्चालन गरी ड्रोनहरु बारे अध्ययन र परीक्षण गर्न चाहन्छन् ।अमेरिकी कानुनमा ड्रोन उडानका बारेमा लामो सूची छ । यी ड्रोनहरु ४०० फिटभन्दा माथि, सरकारी कार्यालयको माथि र विमानस्थलको पाँच माइल वरिपरि ड्रोन उडाउन पाइन्न । राति ड्रोन उडाउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
ड्रोनबाट घर/घरमा सामान कहिले पुग्छ? अमेजनका सिइओको पूर्वानुमान पूरा हुन यस्ता छन् कठिनार्इ को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।